Ciidamada Mariiniska ee Maraykanka oo gacanta ku dhigay burcad badeed | raascasayrmedia.com
← Ciidamada dowladda KMG ah ee Soomaaliya oo maanta gudaha u galay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo
Munaasabad lagu maamuusayay Maalinta Haweenka Adduunka oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho →
Ciidamada Mariiniska ee Maraykanka oo gacanta ku dhigay burcad badeed
Ciidamada Mariiniska ee dowladda Maraykanka ayaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay gacanta ku dhigeen kooxo burcad badeeda Soomaalida oo doonaysay inay qafaashaan Markab laga leeyahay Japan.
Saraakiil ka tirsan ciidamada badda ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada Kumaandooka ee Maraykan ah ay gcanta ku dhigeen koox burcad badeeda ah oo gaaraysa ilaa 4-qof kadib markii weerar fashilmay ay ku qaadeen Markab shixnad Shidaal wada oo laga leeyahay dalka Japan.
Ciidamada Kumaandooska oo la socday mid ka mid ah Maraakiibta wax burburisa ee laga leeyahay Marakaykanka oo lagu magcaabo USS Bulkeley ayaa la sheegay inay ka warheleen doon aad u dhayraysa oo la sheegay inay wateen burcad badeeda Soomaali ah oo kusii siqaysay Markab laga leeyahay dalka Japan oo lagu magacaabo MV Guanabara xili uu marayay meel u dhow xeebaha Cuman.
Bayaan kasoo baxay Ciidamada Caalamiga ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa lagu shegay in Markabkaasi laga leeyahay dalka Japan islamarkaana shaqaalihii saarnaa ay gaarayeen 24-qof iyadoo la tilmaamay inay gabaad ay ka dhigteen mid ka mid ah qolalka Markabka markii weerar qorshaysan ay kala kulmeen burcad badeeda.
Ciidamada Mariiniska ee badda ayaa burcad badeeda Soomaalida ku qabtay meel 328-Meyl Koofur bari kaga beegan xeebta Duqm ee Koofurta Cumaan, waxaana bayaanka uu intaasi ku daray in wax is rasaaseyn ah aysan dhicin xiligii howlgalkaasi uu soconayay.
Markabkani laga leeyahay dalka Maraykanka islamarkaana ah nuuca wax burburiya ayaa waxaa uu qeyb ka yahay Maraakiibta Caalamiga ah ee la dagaalanka burcad badeeda Soomaalida u jooga aga agaarka Xeebaha Cumaan.